Ballansan adeega kirada diyaarad gaar ah kama dambaysta ah iska daba-hawada shakhsi ama ganacsi safarka inay ka qayb galaan final soccer horyaalka kubada cagta Russia ee Koobka Adduunka ee. Duulimaadyada garoonka diyaaradaha waxaa hore u gelinayaa saf laakiin waxaad weli u qabsan kartaa jet gaar ah inay ka qayb galaan kulan ee ugu
FIFA World Cup waa tiro ka mid ah dhacdo isboorti ee adduunka. Waxaan idinku dhacdo erayga, laakiin taasi waa yaraynta ah nooca ugu xun. Koobka Adduunka waa extravaganza ah ee Joogaba, kama dambaysta ah,oo waa kii qof walba waxaa jira waqti ka mid ah noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma ogsoona in halka ay dhacdo laftiisa waa la yaab leh safarka ay jiraan wax kale oo gebi ahaanba si loo qorsheeyo.
Ka sokow xaqiiqada ah in aad leedahay si ay alaabahooda, taas oo waa wax aan ninna ee jecel in ay sameeyaan, waxa kale oo aad leedahay si ay u sameeyaan doorashooyin ka mid ah waxa la sameeyo safarka. Haddii, by fursad, waddista waxaa ikhtiyaar aad markaas in wax dhibaato ah keligeed. Waayo, kuwa duulaya inkastoo dhibaatooyin badan wuxu. Waxyaabaha sida meesha laga saaray gaariga ka dib markii garoonka diyaaradaha, siday u wanaagsan tahay waa hawshii diyaarad ay noqon doontaa, sida macaanka-buuxiyey oo garoomada ku jira,iyo kiraysanayso baabuur ka dib markii aad timaado.
Qaadashada Service Flight FIFA World Cup Jet Private Diyaaradaha Charter ah in ay ku salaysan koobka aduunka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay u safraan waayo waxa ay meesha dhibaato oo dhan. Waxaad gaariga si strip gaarka ah la qaado oo ka tago ilaa aad ka soo laabto. Adeeggu waa mid weyn, sababtoo ah aad tahay gargaare kaliya in ay u adeegaya. Kiraysiga baabuur, waxaa badanaa lagu qotomiyey idiin by markii ugu giraangirihiina taabto dhulka ee garoonka.
Kuwani, ka mid ah sababo badan oo dheeraad ah, waa sababta ay tahay in aad doorato in aad u soo duuli a diyaaradiisa khaaska ah charter si ay u FIFA World Cup. madax xanuun ma u qalantaa in ay macaamiloon. Going to koobka adduunka waxaa mar in waayo-aragnimo uu nool yahay dadka intooda badan ah, oo lagu xusuusan doonaa ee Meyeydaan inuu yimaado. Ha yaanay xasuusta noqon of kaaftoomi in ka kiraysanayso baabuur ama diyaarad laga cabsado yimid. Qaado diyaarad gaar loo leeyahay in ay tahay walwal iyo kaaftoomi free.
madaarada jet gaarka loo leeyahay ee Moscow
Moscow Vnukovo waa garoonka diyaaradaha ugu caansan ee gaarka loo leeyahay ee Moscow, ku yaal 30km koonfur-galbeed ee bartamaha magaalada. Its runway xamili karo diyaarad diyaaradiisa khaaska ah ee size kasta iyo waxa ay leedahay xarumo FBO 24-ka saac macaamiisha jet gaarka ah iyo shaqaalihii.
Fursadaha kale ee garoonka diyaaradaha ee Moscow yihiin Moscow Domodedovo, Moscow ku suganyahay iyo Moscow Ramenskoye.
Charter jet gaar ah Russia 2018 FIFA World Cup goobaha magaalooyinka map
Wadar ah 12 goobaha guud Russia ay martigelin doonaan kulan ee 2018 FIFA World Cup. Waxa intaa dheer in garoon ee Moscow iyo St Petersburg waa kuwan: